Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguCarla
Le ndlu yindlu enkulu kunye ne-attic eyamkelekileyo ye-villa enegadi enkulu macala onke. Ibekwe kunxweme lwaseTyrrhenian eSicily, kwindawo ezolileyo kakhulu imizuzu eli-10 ukusuka elwandle kunye naseCapo d'Orlando, kwiprov. eMessina.
Inekhitshi elikhulu elimenyezelayo-igumbi lokuhlala kunye neveranda apho unokuchitha ixesha ngoxolo kwaye apho unokonwabela umbono omangalisayo wolwandle we-180 °. Indawo yokuhlala inomnyango oqhelekileyo, kodwa ngenye indlela izimele ngokupheleleyo.
Ubuhle obukhethekileyo bendlu kunye negadi yenza ukuba ukuhlala kule ndlu kuhluke. Ibekwe kwindawo esetyenziswa kakuhle, ngoololiwe kunye nakwindlela ekufutshane yendlela. Iyonwabela indawo ekhethekileyo, ngaphezulu nje komphakamo wolwandle kwaye ukusuka apho unakho ukonwabela umbono omangalisayo we-180 ° woLwandle lwaseTyrrhenian. Ukuzola okubonakalisa indawo kuvumela ukuphumla ngokupheleleyo.
Eyona nto yenza ukuba lo mmandla ube wodwa kukuzola, kodwa ukufudukela kwiidolophu ezikufuphi, kukho ubomi obuninzi bobusuku basehlotyeni.
Kuyakuhlala kukho umntu apha endlini, ukuba ayindim emntwini. Kwaye siyafumaneka kuyo nayiphi na imfuno.